पानी पिउने यस्तो छ नियम, यसरी पिउनुस् पानी: - Koshi Online
पानी पिउने यस्तो छ नियम, यसरी पिउनुस् पानी:
हामि सबैलाई यो त थाहा नै होला कि, पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायी हुन्छ । तर, पानी कति, कसरी र कहिले पिउने ? भन्नेबारे मानिसमा ठुलो अन्योल रहेको छ । यसबारे मानिसहरुको आ-आफ्नै प्रकारका तर्कहरु हुन सक्छन् । तर, पानी पिउँदा त्यसको मात्रा र समयबारे भने आयुर्वेदको आफ्नै नियम छ ।
आयुर्वेदका अनुसार यदि सहि मात्रा र समयमा पानी पिउने हो भने पिएको पानीले औषधि सरह काम गर्छ । तर, गलत तरिका र समयमा पानी पिउनाले यसले शरीरमा हानि पुर्याउने आयुर्वेदको भनाई छ । रिसको उत्तम औषधिका रुपमा मानिने पानीको मात्रा मानव शरीरमा ५०-६५% सम्म रहेको हुन्छ । पानी पिउनेबारे आयुर्वेदिक डा. अबरार मुल्तानी यसरि बताउँछन् :
– बिहान उठ्नेबित्तिकै पानी पिउनु स्वाथ्यका लागि उत्तम हुन्छ । यसरि पनि पिउनाले शरीरमा डिटाक्स बनाउँछ र मिर्गौलालाई स्वस्थ बनाई राख्न काम गर्छ ।
– चिया, कफी पिउनुभन्दा अघि पानी पिउने गर्नुहोस् । यसले तपाईलाई एसिडिटीको समस्या हुन दिँदैन ।
– प्राय धेरै मानिसहरुको शारीरिक व्यायाम गरेपछि पानी पिउने बानी हुन्छ । तर, स्वास्थ्यका लागि भने व्यायाम गर्नुभन्दा दस मिनेट अघि पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । यसो गर्नाले शरीरको शक्तिलाई कमजोर हुन दिदैन । र व्यायाम गरेसकेपछि तत्काल पानी पिउनु गर्नुहुदैन । व्यायाम गरेको १५-२० मिनेटपछि आराम गरेर पिउने गर्नुपर्छ । जसबाट शरीर हाइड्रेट हुने गर्छ ।
– हामी धेरै नेपालीहरुको खानासँगै पानी पिउने बानी हुन्छ । तर, यसरी खानासँगै पानी पिउनु भने त्यति स्वास्थकर मानिँदैन । खाना खानु भन्दा २५-३० मिनेटपछि मात्र पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट पाचन प्रणाली चुस्त हुनेगर्छ ।
– अपराह्नको खाजा खानुअघि पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी पिएको पानीले खाजालाई हेभी बनाउन दिँदैन र पाचन प्रणालीमा पनि यसले सुधार गर्दछ ।
– तपाईलाई थकान लागेको बेला, केहि कुरामा रिस उठेको वा टेन्सन महशुस भएका बेला तपाईलाई असजिलो वा छट्पट हुनेगर्दछ । यस्तो अवस्थामा पानी पिउनाले ठुलो काम गर्दछ । त्यतिबेला पिएको पानीले तपाईको मस्तिष्कमा रिल्याक्स गराउने काम गर्छ ।
– हामी धेरैलाई यसबारे थाहा नुहुन सक्छ कि, नुहाउनुअघि पनि पानी पिउनु आवश्यक छ । नुहाउनु अघि पानी पिउनाले यसले शरीरको रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ ।
– राति सुत्नुअघि पानी पिउनु पनि स्वास्थ्यका लागि एकदम लाभदायी हुन्छ । सुत्नुअघि पानी पिउँनाले स्ट्रोक र हर्ट-अट्याक हुनबाट समेत जोगाउँने गर्छ ।
खाना पकाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस्ता छन्
यस्तो अवस्थामा दुधमा बेसार हालेर झुक्किएर पनि नपिउनुहोस्
प्रदेश १ मा ट्राफिक उल्लघंन गरी सवारी चलाउनेबाट ३ लाख राजश्व उठ्यो
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १४:३६
आइजीपी खनालले गरे निर्मला हत्याकाण्डमा मुछिएका एसपी विष्टलाई निष्काशनको सिफारिस
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १४:२५
‘छक्का पञ्जा–३’ र ‘जयभोले’ले जिते दशैँमा दर्शकको मन
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १४:१६
पापी बाबु, जसले दुई अबोध छोराको हत्या गरी आफूले पनि आत्महत्या गरे !
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १४:०८
मेस्सीको दाहिने हात भाँच्चियो, अब तीन साता नखेल्ने
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १३:४९
नेकपा कार्यकर्ताले सुसाइड नोट लेखेर सप्तकोशीमा हाम फालेपछि…
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १३:३०
नक्कली नेपाली नोट र पैसा छाप्ने मेसिनसहित पाँच पक्राउ
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १२:०२
चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने
४ कार्तिक २०७५, आईतवार ११:४८
दशैंको रौनकसँगै मोरङका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल बढ्यो
४ कार्तिक २०७५, आईतवार ११:१२
‘घरायसी विवाद’मा श्रीमानले गरे श्रीमतीको हत्या
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १०:२१